लिभिङ रुम देखि बालकोनीसम्म, यस्तो आलिशान घरमा बस्छन् ऋतिक रोशन (तस्विर) – Medianp
लिभिङ रुम देखि बालकोनीसम्म, यस्तो आलिशान घरमा बस्छन् ऋतिक रोशन (तस्विर)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष २६, २०७४१२:५८
काठमाडौं, २६ पुस । ऋतिक रोशन ४४ बर्षका भएका छन् । उनी १० जनवरी १९७४ मा मुम्बईमा जन्मिएका हुन् । ऋतिक अभिनय, पर्सनल र टाइलकाका कारण धेरै चर्चामा छन् । दुई बर्षपछि पपुलर म्यागेजिन ऋतिकले लेविस अपार्टमेन्ट किनेका थिए ।
पिता राकेश रोशनको घर छोडेपछि ऋतिक अहिले जुहुस्थित यो अपार्टमन्टमा एक्लै बस्छन् । उनका दुई बच्चा ऋहमा र ऋदान कहिले काहिँ यहाँ आउने गरेका छन् ।
अक्षयकुमार र ऋतिक छिमेकी हुन् । जुहु स्थित सि–फेसिन्ङ प्राइमबीच लिल्डिङमा उनीहरु बस्छन् । अक्षय र ऋतिकले अहिलेसम्म कुनै फिल्म एकैसाथ गरेका छैनन् । तर उनीबीच राम्रो सम्बन्ध छ । निर्माता साजि नाडिाडवाला पनि यही बल्डिङमा बस्छन् ।
ऋतिकको यो आपार्टमेन्ट जुहु स्थित प्राइमबीच विल्डिङको तेस्रो घर हो । जसलाई आकिटेक्ट आशिष शाहले डिजाइन गरेका हुन् । एक अन्तवार्तामा शाहले बताएका थिए की कटरिना कैफको घरको डिजाइन मन पराएपछि ऋतिकले उनीसँग सम्पर्क गरेका थिए ।
ऋतिक चाहन्थेकी यो घर उनका छोराहरु ऋहान र ऋदानका हिसाबले बनाइयोस् । घरको फर्नीचर दुबईमा किनिएको हो । उनको घर ३ हजार स्क्वायर फिटमा बनाइएको हो । जसमा दुई बेडरुम छ । यसका साथै एक अफिस रुम समेत छ ।
प्रधानमन्त्रीले गरे दुई मन्त्रीलाई निलम्बन
अब छोरी जन्मिए रु एक हजार प्रोत्साहन भत्ता
शाहरुख खानले किन छाडे ‘सारे जहाँ से अच्छा’ फिल्म ?
अमिर खानको छोरी इरासंग सलमानले यो के गरे ? भिडियो १ दिनमै १० लाख भन्दा बढीले हेरे !
नायिका दीपिका प्रसाईले पहिलो पटक हातमा खोपाइन ट्याटु, लेखिन् यस्तो स्टाटस
सैफ अली खानकी छोरी साराको यो हट तस्विरहरु हेर्नुहोस्
टाइगर श्राफले बलिउड नायक ऋतिक रोशनको लागि गरेको यो डान्स भिडियो भयो भाइरल